Furtuuwwan Qaxxaamuraa LibreOffice Impreessiif - LibreOffice Help
1 Furtuuwwan faankishinii LibreOffice Impreessiif
2 Furtuulee qaxxaamura agarsiisa islaayidii keessaa
3 Furtuuwwan Qaxxaamuraa Mul'ata Baratamaa keessaa
5 Furtuuwwan Qaxxaamuraa LibreOffice Impreessiif
6 Tartiiba qabsiisaa islaayidii keessatti naanna'iinsa gabatee cuqoo wajjin
F2 Barruu gulaali.
Ctrl+F3 Gurmuu Dhiisi.
F4 Qubannoo fi Hammamtaa
F5 Agarsiisa islaayidii mul'isuu
Ctrl+F7 Waa Dhugoomsuu
F8 Tuqaalee Gulaali
Ctrl+Shift+F8 Barruu Godayyaatti Taasisi
Ctrl+F3 Akkaataalee fi Dhangeessuu
Esc Dhiheessa xumuraa.
Spacebar ykn xiyya Mirgaa ykn xiyya Gadii ykn Page Down ykn Enter ykn Deebisi ykn N Galtee itti aanu taphadhu (yoo kamiyyuu, yookin islaayidii itti aanutti deemi)
Alt+Page Down Galteewwan osoo hin taphatin islaayidii itti aanutti deemi.
[lakkoofsa] + Enter lakkoofsa islaayidii barreesitii Enter dhiibi gara islaayidii deemuuf.
Xiyya Bitaa ykn xiyya Olii ykn Page Up ykn Backspace ykn P Galtee darbe deebi'iitii taphadhu. Yoo galteen darbe islaayidii kana irra hin jiraanne, islaayidii darbe agarsiisi.
Alt+Page Up Galteewwan osoo hin taphatin islaayidii itti aanutti deemi.
Home Agarsiisa islaayidii keessatti islaayidii jalqabaatti utaali.
End Agarsiisa islaayidii keessatti islaayidii dhumaatti utaali.
Ctrl+ Furtuu idaatii Gara islaayidii duraanii deemi.
Ctrl+ Furtuu idaatii Gara islaayidii itti aanuu dhaqi.
B ykn . Dayeessoo gurraacha agarsiisi hanga mudata furtuu itti aanuu ykn geengoo hantuuttee.
W ykn , Dayeessoo adii agarsiisi hanga mudata furtuu itti aanuu ykn geengoo hantuuttee.
Furtuu(+) ida'uu Faaran Guddisi
Furtuu(-) hir'isuu Faaran Xinneessi
Times(×) Key (number pad) Fuula foddaa keessatti taasisi.
Divide(÷) Key (number pad) filannoo ammee irratti faaran guddisi.
Shift+Ctrl+G Wantoota filataman gurmeessi.
Shift+Ctrl+Alt+A Garee filatame hin gurmeessin.
Ctrl+ Furtuu idaatii Gurmuu saagi, kanaaf wantoota kuphaa garee gulaaluu dandeessa. Gurmuun alatti cuqaasi mul'ata baratamaatti deebi'uuf.
Shift+Ctrl+G Wantoota filataman walitti maki.
Shift+Ctrl+G Wanta filatame addabaasi. Walmakiinsi kun kan hojjatu wantoota lama ykn bay'ee walitti makuun wanta uumame qofa irratti.
Ctrl+ Furtuu idaatii Fulduratti Fidi
Ctrl+ Furtuu idaatii Duratti Dabarsi
Ctrl+ Furtuu idaatii Duubatti Ergi.
Ctrl+ Furtuu idaatii Gara Duubatti Ergi.
Ctrl+Enter Murfoota maamiloo; murfisa siin qinda'a.
Ctrl+Shift+F5 Mursaa hincinnee (murfisaaf hin fayyadu)
Ctrl+Shift+F5 Iddoowwan duwwaalaa. Yoo barruun qixxatee, iddoowwan duwwaalaa murfisaaf hinfayyadu, akkasuumas
Jijjiiri+Saagi Cita sararaa jijjiiraa keewwataa malee
Bitaa Xiyya Qaree bitaat siqsi
Shift+Bitaa Xiyya Filannoo bitaatti waliin qaree siqsi
Alt Furtuu Gara jecha jalqaabatti deem
Alt+Shift+cuqaasi Jecha jechaan bitaatti filuu
Mirga Xiyya Qaree mirgatti siqsi
Shift+Mirga Xiyya Filannoo mirgatti waliin qaree siqsi
Alt+Page Up Gara jalqaba jecha ittaanuu deemi
Alt+Shift+cuqaasi Jecha jechaan mirgatti filuu
Xiyya olii Qaree sarara tokko ol siqsi
Shift+Xiyya Ol Gara qixxa ol keessaatti sararoota filuu
Alt+Page Up Qaree gara jalqaba keewwata darbeetti siqsi
Alt+Shift+cuqaasi Hanga jalqaba keewwatatti fili. Tuqiinsi furtuu ittaanu filannoo hanga jalqaba keewwata ittaanuu babal'isa
Xiyya Gadee Qaree sarara tokko gad siqsi
Shift+Xiyya Gad Gara qixxa gadii keessaatti sararoota filuu
Alt+Page Down Hanga dhuma keewwatatti fili. Tuqiinsi furtuu ittaanu filannoo hanga dhuma keewwata ittaanuutti babal'isa
Ctrl+F3 Gara sarara jalqaabatti deem
Ctrl+F3 Gara jalqaaba sararaa deemiitti filadhu
Ctrl+F3 Gara dhuma sararatti deemi
Ctrl+F3 Gara dhuma sararaa deemiitti filadhu
Ctrl+F3 Barruu dhuma galmee irraa deemiitti filadhu
Alt Furtuu Barruu dhuma jechaa irratti haqi
Alt+Page Up Barruu jalqaba jechaa haqi
Ctrl+Shift+F5 Barruu dhuma himaa irraatti haqi
Ctrl+Shift+F5 Barruu jalqaaba himaa irraatti haqi
Furtuu xiyyaa Wanta filatame ykn mul'ata fuulaa gara kallattii xiyyaatti siksi.
Ctrl+ Furtuu idaatii Gara naannoo mul'ata fuulatti siksi.
Shift + harksuu deemsa wanta filatamee surdalaan ykn sarjaan jijjiira.
Ctrl+ drag (with Copy when moving option active) Ctrl gadi qabuu fi garagalcha wantaa uummuf wanta harkisuu.
Alt Furtuu Alt fakkasuuf gadi qabi ykn wiirtuu gara alaa wantaa irraa harkisuudhaan wantoota hagamtaa jijjiiri.
Alt furtuu+cuqaasi Wanta wanta ammee filatame duuba jiruu fili.
Alt+Shift+cuqaasi Wanta wanta ammee filatame dura jiruu fili.
Shift+cuqaasi Wantoota ykn keewwata barruu walcinaa fili. jalqaba filannoo irratti cuqaasi, filannoo xumuraatti siksi, achiin Shift gadi qabi yommuu cuqaastu.
Shift+harkisuu (yommuu hammamtaa jijjiirtu) Wantaa hammamtaa jijjiruuf kukkuta wantaa argachuuf yommuu harkistu Shift gadi qabi.
Furtuu cancalaa Wantoota tartiiba isaan ittin uumamaniin fili.
Shift+Tab Wantoota faallaa tartiiba isaan ittin uumamaniin fili.
Escape Haalata amme dhisi.Exit current mode.
Galchi Dhiheessa keessatti iddooqa (iddoo+qabduu)kakasi(yoo goodayyii filatame qofa).
Ctrl+Enter Islaayidii irratti wanta barruu itti aanutti siksa.
Fuula Olee Islaayidii itti duraatti jijjiiri. Islayidii jalqabaa irratti faankishinii hin qabu.
Fuula Gadee Islaayidii itti aanutti jijjiiri. Islayidii dhumaa irratti faankishinii hin qabu.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Impress/Shortcut_Keys_for_Impress/om&oldid=1342879"